Amasu Ayisikhombisa Asetshenzisiwe Ekuchazeni Intengo Yezobuchwepheshe | Martech Zone
7 Amasu Asetshenzisiwe Ekuchazeni Intengo Yezobunhloli
NgoLwesibili, ngoJuni 30, i-2015 NgoMsombuluko, Juni 29, 2015 Douglas Karr
Ngesikhathi IRCE, Ngikwazile ukuhlala phansi UMihir Kittur, co-founder and Chief Innovation Officer e-Ugam, idatha enkulu analytics ipulatifomu enika amandla izinkampani zezohwebo ukuthi zenze izenzo zesikhathi sangempela ezandisa ukusebenza kwemali engenayo. I-Ugam yethule kulo mcimbi ukuxoxa ngamanani entengo nokuthi izinkampani zingazivikela kanjani izimpi zamanani entengo. Ngokusebenzisa amasiginali wokufunwa kwabathengi aqoqwe ku-inthanethi futhi abakhe kumasu wamanani wamakhasimende abo, i-Ugam ikwazile ukwenza ngcono ukusebenza kwesigaba ngokwenza ngcono okunezinhlobonhlobo nokuqukethwe kanye nentengo.
Nazi Izindlela Ezi-7 Zentengo Ezichaziwe
Ukuncintisana Kwamanani Okuncintisana kuyindlela yokulandelela amanani ezincintisana nawo ukuthola ukuqonda okungcono kwezikhundla zamanani ezitolo emakethe. I-Price Intelligence kanye ne-Competitive Price Monitoring zivame ukusetshenziswa ngokungafani.
Ukuqina Kwentengo isilinganiso sokuthi ukuthengisa kwakho komkhiqizo kuphendula kanjani kushintsho lwentengo yalowo ancintisana naye.
Zamanani Dynamic umqondo wezinto zamanani ezisuselwa ezimeni zemakethe eziguquguqukayo. Kungumkhuba wokunquma amanani ngamandla (ngendlela ewuketshezi) ngokuya ngokuhlinzekwa, ukufunwa, uhlobo lwamakhasimende kanye / noma ezinye izinto, njengesimo sezulu.
Intengo Yezobuhlakani umkhuba wokuqonda kangcono isikhundla sakho sentengo emakethe uma kuqhathaniswa nomncintiswano wakho. Ivumela abathengisi ukuthi bazi ngezinsolo zamanani entengo ezimakethe futhi babe nokuqonda nokwazi ngomthelela wabo ebhizinisini.
Ukusebenziswa Kwentengo ukusetshenziswa kwe- analytics ezibikezela ukuziphatha kwabathengi ezingeni lemakethe emincane futhi zisungule ukutholakala komkhiqizo nentengo ukukhulisa ukukhula kwemali engenayo. Inhloso eyinhloko ukuthengisa umkhiqizo ofanele kumakhasimende afanele ngesikhathi esifanele ngentengo elungile.
Intengo Esekelwe Emithethweni kuyindlela yokwaba amanani omkhiqizo ngokuya ngemithetho / amafomula. Uhlelo lusiza ukwenza ngokushesha ukuguqulwa kwentengo nganoma yisiphi isikali futhi kunciphise ngokuphawulekayo ukugcinwa kwentengo. Zamanani Dynamic iqaliswa ngokusebenzisa intengo esuselwa emithethweni (isb., “Uma intengo yalowo oqhudelana naye yehlela ku-X, intengo yethu iya ku-Y,” “Uma umkhiqizo uphansi ku-inventory, phakamisa intengo ibe ngu-Z.”)
Intengo ye-Smart Dynamic is Zamanani Dynamic ngezinga elengeziwe lobuhlakani bamakhasimende obuthinta ama-Social Signals (isb., ukubuyekezwa komkhiqizo, ukuthanda kwe-Facebook, okushiwo yi-Twitter, njll.)
Ungafunda konke mayelana ne-Pricing Intelligence (lapho ngithole khona lezi zincazelo) ku- Ubuhlakani Bokubeka Intengo e-Ugam eBook, mahhala ukulanda.
Ezika-Ugam Intengo Yezobuhlakani Nokusebenziseka Kwamandla Isixazululo yisixazululo esuselwa ku-SaaS esihlanganisa futhi sihlanganise idatha yesikhathi sangempela yokuncintisana, amasiginali we-e-funa, idatha yokuthengiselana, idatha yabathengisi, nedatha yomuntu wesithathu ukuqonda lokho ikhasimende elizimisele ukukukhokha, namanani entengo ngobuhlakani ngesikhathi sangempela.
Tags: Ukuqina KwentengoUkuncintisana Kwamanani Okuncintisanai-ebookirceUMihir KitturIntengo YezobuhlakaniUkusebenziswa Kwentengozamananiukuhlakanipha kwamananiIntengo Esekelwe EmithethweniIntengo ye-Smart Dynamicizixazululo ze-ugam
Idizayini Ephendulayo kanye ne-Search Search Tipping Point
Amathiphu Wokwakhiwa 9 Wokuthatha Izithombe Ezingakholeki